Izy io, araka ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanana, Désiré Rakotomalaza, dia akora fanamasahana sakafo hisorohana ny fanapahana hazo noho ny fahatsapana fa miha ringana ny ala eto Madagasikara. Nitetezana faritra miisa 8 izay vao hita ny akora fototra miisa 5 mandrafitra azy ity. Toerana miisa 2 dia ny distrikan’Amparafaravola sy ny kaominina Asabotsy Anjiro moa no tena ivon’izay akora fototra izay, raha ny fikarohana nataon’izy ireo. Isan’ny tombontsoa azo avy amin’ity solon-tsaribao ity ilay izy tsy manempotra sy mora mirehitra ary mora vidy noho ny saribao manimba tontolo iainana. Maharitra ora 4 ny 1,5 kilao aminy, hoy hatrany ny fanazavana. Ny volana janoary 2020 kosa no hieritreretana hanaparitahana azy eny amin’ireo tsena fa aleo, hoy ny fikambanana, hanangona akora misimisy aloha.